Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya
Sunday June 28, 2020 - 18:09:15
Waayihiin mugddiga ahaa ee garoonka kubabdda cagta Muqdisho ayaa soo dhamaaday, waxaana rumoobaya riyooyinkii mudada dheer soo jiray marka uu garoonku marti geliyo cayaartii ugu horeysay muddo 16 saanadood ah maalinta talaadada ah ee inasoo aadan.
Guddoomiyaha Elman FC oo is casilay, sheegayna in uu kooxda sii garab taagnan doono.
Tuesday April 14, 2020 - 16:59:13
Guddoomiyaha Naadiga Kubbadda Cagta ee Elman, Cabdirisaaq Faarax Cumar (Goroje) ayaa maanta ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka guddoomiyenimada, kaddib muddo 2 sano ah oo uu xilkaas hayay.
Xiriirka kubbadda Cagta oo munaasabad duco ah u sameynaya cayaaryahano dhawaan geeriyooday.
Wednesday April 08, 2020 - 14:31:42
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubbadda cagta ayaa munaasabad duco ah u sameynaya cayaaryahano qaran oo dhawaan geeriyooday, sida uu shaaciyay, xafiiska warfaafinta xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya.
Xiddiggii hore ee Qaranka iyo Horseed AUN Saciid Ducaale oo geeriyooday.
Wednesday April 01, 2020 - 11:19:10
War aan wanaagsanayn ayaa kasoo yeeray dalka Yemen halkaas oo uu maanta kiu geeriyooday cayaaryahankii hore ee xulka qaranka Soomaaliya iyo naadiga Horseed, Saciid Ducaale.
Xulka qaranka Soomaaliya oo soo diray farriin wacyi-gelin ah oo ka dhan ah cudurka COVID-19.
Monday March 30, 2020 - 14:18:39
Cayaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa soo diray fariimo wacyi-gelineed oo ka dhan ah cudurka dilaaga ah ee Coronavirus, iyagoo kusoo biiray ololaha caalamiga ah ee FIFA hoggaamineyso ee lagula dagaallamayo cudurkan caalamka faraha ba'an ku haya.
Madaxweynaha FIFA oo ka tacsiyeeyay geerida Cayaaryahan hore Cabdulqaadir Maxamed Faarax.
Thursday March 26, 2020 - 20:59:35
Madaxweynaha xiriirka kubbadda cagta aduunka Gianni Infantino, ayaa dhambaal tacsi ah soo gaarsiiyay madaxweynaha xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab, oo uu kaga tacsiyeeyay geeridii ku timid cayaaryahankii hore ee naadiga Batroolka Alle ha u naxariistee marxuum Cabdulqaadir Maxamed…
FIFA, WHO iyo xiriirrada kubbadda cagta dalalka dunida oo iska kaashanaya la dagaallanka Covid-19
Wednesday March 25, 2020 - 17:31:47
Ururka kubbadda cagta aduunka ee FIFA ayaa billaabay hindise wacyi-gelineed oo ka dhan ah cudurka dilaaga ah ee Covid-19, waxaana FIFA ay arrinkan ka kaashaneysaa ururka caafimaadka aduunka ee WHO iyo xiriirrada xubnaha ka ah FIFA.
CECAFA oo soo saartay isku aadka koobka qaramada. Group B: Soomaaliya Sudan, South Sudan iyo DR Congo
Sunday November 24, 2019 - 14:45:28
Ururka kubbadda cagta bariga iyo bartamaha Afrika ee CECAFA ayaa maanta soo saaray isku aadka koobka qaramada ee dalalka ku jira ururka CECAFA, iyadoo dalka DR Congo uu marti ahaan ugasoo qeyb geli doono tartanka.
Kooxda DT oo ku guuleysatay koobkii kubbadda cagta dhallinyarada ee sanadka 2019
Wednesday November 20, 2019 - 09:09:59
Waxaa lasoo gaba-gabeeyay koobkii kubbadda cagta dhallinyarada ee sanadka 2019-ka, waxaana ku guuleysatay kooxda Daaru Tarbiya [DT]. Tartanka dhallinyarada ayaa la qabtaa sanad kasta tan iyo markii uu billowday sanadkii 2016-kii.
Wednesday November 20, 2019 - 08:51:26
Gudoomiyaha xiriirka kubbadda Cagta Soomaaliya ahna xubin ka mida guddiga fulinta CAF, Cabdiqani Saciid Carab, ayaa ku sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar, halkaas oo uu uga qeyb galayo shirka guddiga fulinta Caf oo looga hadli doono arrimo dhowr ah oo quseeya horumarinta kubbadda cagta qaaradda.
Wafdi ka socda X/S/K/Cagta oo ka qeyb galay shirka doorashada UAFA
Monday September 16, 2019 - 16:20:40
Wafdi heer sare ah oo ka socda xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya ayaa ka qeyb galay shir weynaha doorashada xiriirka kubbadda cagta Carabta ee UAFA kaas oo maanta oo isniin ah kusoo gaba-gaboobay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga.
Isku aadka CECAFA U-20 oo la shaaciyay
Saturday September 14, 2019 - 09:22:04
Ururka kubbabda cagta dalalka bariga iyo bartamaha Africa ee CECAFA ayaa sii daayay isku aadka cayaaraha wiilasha da'doodu ka yartahay 20-ka sano xilli cayaareedka 2019-ka.
Garsoorayaasha Kubbadda cagta Soomaaliya oo tababar loo furay.
Saturday September 07, 2019 - 13:32:47
Xiriirka kubbadda cagta Soomaaliya ayaa maanta tababarka FIFA MA u furay garsoorayaasha kubbadda cagta Soomaaliya, waxaana tababarkaasi maal gelineysa hey'adda FIFA.
X/K/Cagta oo cambaareeyay warbixin wargeys Sacuudigu leeyahay ka qoray cayaartii Soomaaliya iyo Zimbabwe.
Saturday September 07, 2019 - 00:56:32
Xiriirka kubbadda Cagta Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareeyay qaabka uu wargeys laga leeyahay dalka Sacuudi Carabiya wax uga qoray cayaartii Khamiistii dhex martay xulalka Soomaaliya iyo Zimbabwe ee ka tirsanayd is reeb-reebka koobka aduunka ee 2022-ka.
Afar guddoomiye naadi oo jabuuti u jooga dhiiri-gelinta xulka qaranka
Thursday September 05, 2019 - 15:30:17
Guddoomiye-yaasha 4 ka mida naadiyada kubbadda cagta dalka Soomaaliya ayaa ku sugan dalka Jabuuti halkaas oo Soomaaliya ay lugta hore ee is reeb-reebka koobka aduunka ee 2022 kula cayaareyso dalka Zimbabwe.
Wiilasha Soomaaliya oo barri wajahaya Dhiggooda Kenya
Thursday August 15, 2019 - 13:55:12
Xulka qaranka kubbadda Cagta dalka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 15-ka sano laguna naaneeso Ocean Stars Youngsters ayaa Wajahi doona dhiggoodda Kenya cayaarta furitaanka ee CECAFA U-15 Championship oo sanadkan lagu qabanayo dalka Eritrea.
Dekedda oo ku jirta diyaar garowgii ugu dambeeyay ka hor kulanka Zamalek
Wednesday August 14, 2019 - 13:51:41
Kooxda kubbada Cagta Dekedda ee dalka Soomaaliya ayaa isu diyaarineysa kulankii ugu horeeyay ee CAF Champions League ee koox ka socota Soomaaliya ay cayaarto muddo 30 sanadood ah.
Raadsan FC oo ku guuleysatay Horyaalka heerka 1-aad
Thursday May 02, 2019 - 19:19:24
Naadiga Kubbadda Cagta Raadsan ayaa ku guuleystay horyaalka heerka 1-aad ee dalka xilli cayaareedka 2018-2019, iyagoo booskooda ka diyaarsaday horyalka SPL ee xilli cayaareedka soo socda.
Saxafi oo guul ku bilowday horyaalka Heerka 1-aad
Saturday February 23, 2019 - 18:28:55
Kooxda kubbada Cagta ee Saxafi ayaa guul ku bilowday horyaalka heerka 1-aad ee dalka kaddib markii ay 2-1 kaga adkaatay dhiggeeda Bariga Dhexe maanta.
Cayaartii Soomaaliya iyo Eritrea oo aan dhacayn usbuucan.
Thursday February 14, 2019 - 19:08:38
Cayaar saaxiibtinimo oo lau waday in todobaadkan ay magaalada Muqdisho ku dhex marto xulalka da'doodu ka yartahay 20-ka sano ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa muddo kooban dib loo dhigay, sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Cagta.
1 Horseed S.C 10 6 1 3 21
2 Dekedda SC 11 6 2 3 21
3 Mogadishu City Club 10 6 2 2 20
4 Elman FC 10 5 2 3 18
5 Heegan S.C 11 5 4 2 17
6 Raadsan 11 4 5 2 14
7 Midnimo 11 3 4 4 13
8 Gaadiidka FC 11 3 6 2 11
Dekedda SC 1:1 Midnimo
Raadsan 3:0 Gaadiidka FC
Elman FC 1:1 Heegan S.C
Mogadishu City Club 1:2 Rajo FC
Horseed S.C 1:1 Jazeera SC
Gaadiidka FC 0:1 Dekedda SC
Midnimo 0:2 Heegan S.C
Raadsan 2:2 Rajo FC
Elman FC 4:1 Jazeera SC
General Da’ud Cup
1 Horseed S.C 6 4 0 2 14
2 Mogadishu City Club 6 4 1 1 13
3 Geeska Afrika 5 3 1 1 10
4 Jazeera SC 4 3 1 0 9
5 Gaadiidka FC 5 3 2 0 9
6 Sahafi FC 4 2 1 1 7
7 Heegan S.C 4 1 2 1 4
8 Elman FC 3 1 1 1 4
Gaadiidka FC 5:2 Badbaado FC
Batroolka FC 1:1 Geeska Afrika
Mogadishu City Club 1:0 Dekedda SC
Horseed S.C 0:0 Elman FC
Heegan S.C 1:2 Jazeera SC
Jamhuuriya 2:3 Waxool FC
Raadsan 0:0 Sahafi FC
Rajo FC 1:1 Midnimo
Batroolka FC 0:3 Gaadiidka FC
1 Jeenyo FC 5 5 0 0 15
2 Batroolka FC 5 4 1 0 12
3 Geeska Afrika 5 4 1 0 12
4 Sahafi FC 5 2 2 1 7
5 Waxool FC 4 2 2 0 6
6 Albeder 4 2 2 0 6
7 Badbaado FC 5 2 3 0 6
8 Gantaalaha Afgooye 5 1 4 0 3
Geeska Afrika 3:1 Waxool FC
Albeder 2:3 Jeenyo FC
Madbacadda FC 2:4 Batroolka FC
Sahafi FC 3:1 Jamhuuriya
Gantaalaha Afgooye 4:5 Badbaado FC
Albeder 1:0 Madbacadda FC
Jamhuuriya 1:5 Gantaalaha Afgooye
Geeska Afrika 2:1 Badbaado FC
Jeenyo FC 4:0 Madbacadda FC
1 Ummah Hospital 12 11 1 0 33
2 Badbaado FC 12 9 3 0 27
3 Gantaalaha Afgooye 12 7 2 3 24
4 SomaliFruit 12 3 6 3 12
5 Gasco 12 3 7 2 11
6 Hillaac FC 12 2 8 2 8
7 Albeder 12 1 9 2 5
Ummah Hospital 2:4 Badbaado FC
Gasco 0:3 Gantaalaha Afgooye
SomaliFruit 3:0 Albeder
Hillaac FC 1:1 Gantaalaha Afgooye
Ummah Hospital 4:1 Albeder
Gasco 1:0 SomaliFruit
Hillaac FC 1:5 SomaliFruit
Badbaado FC 5:3 Albeder
Ummah Hospital 2:0 Gasco
© Xuquuqda website-kan waxa ay u gaar tahay Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya 2008 - 2020